Madaxweynaha Oo Ka Hadlay Weerarkii Muqdisho. – SBC
Madaxweynaha Oo Ka Hadlay Weerarkii Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii maanta lagu Qaaday hotel Jasiira oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa sheegay in ujeeddada allshabaab ay tahay inay hor istaagaan rabitaanka shacabka oo ah inay nabad iyo barwaaqo gaaraan, taasina aaney marnaba dhici karin.
Madaxweynaha ayaa sheegay in hawlgallada milateri ee sida wadajirka ay u fulinayaan ciidammada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay khalkhal weyn ku abuureen Kooxda all-shabaab, taasina ay dhalisey inay iyagoo naf la caarri ah ay beegsadaan shacabka, Sida uu yiri.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn ku boorriyay ciidammada Dowladda inay kordhiyaan feejignaantooda, isla markaana ay soo dedejiyaan hawlgallada lagu ciribtirayo Ururka All-Shabaab oo dagaal kula jira dowladda somaliya.